Courses - Ivontoerana fampianarana amin'ny fiteny roa
F1 Loharanon'ny mpianatra
Anglisy ho an'ny mpitsoa-ponenana
Home Anglisy ho an'ny mpitsoa-ponenana, Asylees, SIV, ary iharan'ny fanondranana olona an-tsokosokoCourses
Courses fiofanana amin'ny teny anglisy
Ny kilasy ESL dia mifantoka amin'ny fahaizan'ny fiteny velona. Ny kilasintsika dia mampianatra ny fahaiza-manao fototra amin'ny fitenenana, fihainoana, famakiana ary fanoratana. Manana kilasy anglisy izahay ho an'ny ambaratonga rehetra manomboka eo alohan'ny hatombony ka mandroso.
Fototry ny literatiora
Ity fampianarana ity dia natao ho an'ny mpianatra tsy mahay fahalalana Anglisy. Ireo mpianatra dia hianatra ny abidia, ny fanekena isa, ny teny fahitana ary ny fonetika.
Ho an'ireo mpianatra manana fandaharam-potoana tsy ara-dalàna na izay lavitra dia lavitra, BEI dia manana kilasim-panamboarana an-tserasera ho an'ny mpianatra hianatra teny anglisy na aiza na aiza sy amin'ny fotoana rehetra. Ireo kilasy dia omena amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny Burlington English.
Ireo kilasy Anglisy nampianarina tamin'ny fomba fiasa Hybrid dia manome torolàlana amin'ny kilasy an-tserasera na amin'ny tarehy. Ity fampianarana ity dia tsara ho an'ny mpianatra izay maniry ny fampianarana sy ny fanaon-tena miaraka amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra mpiara-mianatra.
Torohevitra vondrona vondrona
Ity fampianarana ity dia tonga lafatra amin'ny tarika madinika izay manana tanjona hianarana fiteny mitovy ary mila miasa amin'ny tanjona manokana amin'ny fiteny.
Kilasy kilasy tokana
BEI dia manome torolàlana manokana ho an'ny mpianatra manana fahaiza-manao voafetra izay mety hanahirana ny handray anjara amin'ny kilasy vondrona. Ny fahaiza-manao voafetra dia mety misy, saingy tsy voafetra ho an'ny fahitana ambany, ny fihenan'ny fihainoana ary ny olan'ny fihetsiketsehana.
Anglisy ho an'ny Courses manokana amin'ny tanjona manokana
Fahaizana fiainana anglisy
Ireo fampianarana ireo dia mampiditra ireo mpitsoa-ponenana vao tonga amin'ny asan'ny fiarahamonina amerikana. Ho lasa mifankahalala amin'ny sehatra samihafa eto an-toerana ny mpianatra ary ny fahaizana anglisy dia ilaina hahomby. Ny lohahevitra momba ny laminasa malaza dia ny literatiora ara-bola, ny literatiora momba ny fahasalamana, ary ny fahatakarana ny rafi-pampianarana amerikana.
Ireo fampianarana ireo dia manome fahaiza-manao anglisy ho an'ny indostrian'ny asa manokana. Ireo mpianatra amin'ireto fampianarana ireto dia mety manana traikefa teo aloha eo amin'ireo sehatra ireo na mety ho liana amin'ny hiditra izany sehatry ny asa izany. Lohahevitra momba ny laminasa malaza dia ny Medical English, English for Information Technology, ary anglisy ho an'ny Profesionalisme ara-pitantanana.
Ity fampianarana ity dia namboarina ho an'ny mpampiasa izay manana mponina maro an'isa mpialokaloka miasa. Matetika dia ao an-toeram-piasana matetika ny kilasy ary mitambatra ny fahaizan'ny fahaizana anglisy anglisy miaraka amin'ny voambolana sy andian-teny manokana mifandraika amin'ny indostria.
Fanabeazana-manokana manokana anglisy
Ny filàna manokana an'ny vondron'ny mpitsoa-ponenana ao Houston dia mety hamaritra fa ny kilasy anglisy amin'ny tanjona manokana dia ilaina ny hampiroboroboana ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan-tena amin'ny faritra toa ny Fifaninanana, Fanoratana, sns.
Ivontoerana fampianarana fiteny roa
Fa maninona no BEI?
Fanekena sy maha-mpikambana
Politika fanafoanana sy famerenam-bola
Miomàna amin'ny fizaram-pirenena